Dingana Manaraka: Tanora Shipibo ho Mpanoratra Gazety Nomerika Chariboan Joi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2015 3:14 GMT
Vaovao farany avy amin'ny tetikasa nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices.
Mpandray anjara tamin'ny atrikasa mampiseho ny sertifikàn'izy ireo tamin'ny fahavitan'ny fiofanana.
Nanomboka tamin'ny 9 Febroary ka hatramin'ny 20 Febroary, nanatontosa atrikasa momba ny asa fanaovan-gazety nomerika ny tetikasa Chariboan Joi, iray amin'ireo asa fototry ny tetikasa. Tanora Shipibo 10 no nandray anjara tamin'ny tetikasa, anisan'izany ny mpianatra sekoly ambony avy ao amin'ny faritra Amazona Peroviana ao amin'ny vondrom-piarahamonina indizeny Nueva Betania, Nueva Palestina sy Bethel. Ny tanjon'ny atrikasa dia hampianatra ny fototry ny asa fanaovan-gazety nomerika an'olo-tsotra, miaraka amin'ny fanamafisana ny fanangonam-baovao am-peo mampiasa finday.
Ny Fikambanan'ny Tanora Indizeny ao amin'ny Faritra Ucayali (OJIRU) no niandraikitra ny fampidirana ireo mpandray anjara sy ny filazana ny fandaharam-potoanan'ny atrikasa. 13 ka hatramin'ny 17 taona ireo mpandray anjara, ka maro tamin'izy ireo no niara-dia tamin'ny ray aman-dreniny niainga tao amin'ny fiarahamonin'izy ireo hatrany amin'ny toerana misy ny fikambanana Alianza Arkana ao an-tanànan'i Yarinacocha, adiny efatra mialaa avy ao amin'ny toerana niavian'izy ireo.
Natomboka tamin'ny fitsapa-pahaizana ny atrikasa mba hamantarana ny fari-pahaizan'ireo mpandray anjara. Tamin'ny vokatra azo, namboarina ny fandaharam-potoanan'ny atrikasa mba hanotofana ny hantsana nomerika. Nisy ny lesona azo nampiharina momba ny fikarohana fitaovana ao amin'ny aterineto, ary nampiana hanangana kaonty mailaka sy Facebook ireo tanora. Nanomboka tamin'izany, nanjary namana tsy afa-nisaraka tamin'ireo tanora ny aterineto sy ny solosaina. Ka nanjary sarotra tamin'izy ireo ny misaraka amin'ireo namany (aterineto sy solosaina) hitany vao haingana, na dia amin'ny fotoana fatoriana aza. Nampiasa izany indrindra izy ireo mba hijery fialam-boly sy fanatanjahantena, ary manao Facebook. Tena nahafa-po ny nahita ny fomba nandresen'izy ireo ny tahotra solosaina sy aterineto, hijery azy ireo mihazatra isan'andro isan'andro amin'izany tontolo vaovao izany.
Mahafantatra ny fitaovana fikarohana ao amin'ny Aterineto.
Iray tamin'ireo asan'ny atrikasa ny mizatra fomba fijery vaovao, miankina amin'ny tombontsoan'izay mampahafantatra. Ka namorona izahay tantaran'olom-pirenena iray voahosy noho ny tsy firehetan'ny jiron'ny fifamoivoizana tsara, ary tamin'izany no namoronanay vaovao roa mifanohitra. Ny iray notohanan'ny fiadidiana monisipaly ara-bola, tompon'andraikitra amin'ny jiron'ny fifamoivoizana, ka nanafina ny vaovao momba an'io tranga io. Onjam-peo tsy miankina kosa ny iray hafa izay nitafatafa tamin'ireo tafiditra amin'ity raharaha ity, afa-tsy ny fiadidiana ao an-toerana izay tsy nety natao antsafa. Avy amin'izany izahay no nanadihady vaovaom-paritra sy vaovam-pirenena, ary niezaka namantatra ireo tombotsoa miafina araka ny fomba fijerin'ny tsirairay. Raha mpijery fotsiny ireo tanora tany am-boalohany dia nanana fijery mitsikera amin'ny fahazoana antoka ny fahamarinan'ny vaovao iray sy ny tsy fitanilàna.
Asa iray hafa nandritra ny atrikasa ihany koa ny famokarana fandaharana fampielezam-peo, izay mody natao hoe any amin'ny onjam-peo izy ireo miaraka amin'ny zava-iainana sy ny fitaovana. Ireo tanora ihany no tompon'andraikitra tamin'ny fandaharana, tatitra, antsafa, mozika ary ny vaovao. Nitsidika ny onjam-peo La Primerísima Pucallpa, izay mandefa fandaharana amin'ny FM sy ny aterineto mandritra ny fandaharam-baovao FECONAU (Federasion'ny Vondrom-piarahamonina Teratany ao amin'ny Renirano Ucayali) atolotr'ilay mpanao gazety Shipibo Jorge Soria ihany koa izy ireo. Nanatri-maso ny fomba fitantanana fandaharana tao izy ireo. Natao antsafa ihany koa ry zareo.
Fampiharana iray farany ny fitateram-baovao amin'ny finday. Nozaraina vondrona tanora roa sy telo ireo tanora, niaraka tamin'ny mpikambana ao amin'ny OJIRU, nandehandeha manodidina ny tanàna izy ireo mba hanadihady ireo mponina mikasika ny fampianarana, ny tontolo iainana, sy ny asam-panjakana. Niverina niaraka tamin'ny fanadihadiana ireo mpandray anjara, ny sasany tamin'ny teny Shipibo, ny hafa tamin'ny teny Espaniola. Ho hita tsy ho ela an-tserasera izany.
Nifarana tamin'ny lanonana famaranana fohy ny atrikasa izay nandraisan'ireo mpandray anjara mari-pahaizana. Mafy sy nandreraka ny asa, saingy tena nahafa-po, satria maro ny fandinihana momba ny fanomezan-danja indray ny kolontsain'ny mponina Shipibo ankehitriny, ny politikam-panjakana mahakasika ny zon'izy ireo, ireo indostria mpitrandraka mpandoto tontolo iainana, ny tsy fisiana na ny tsy fahombiazan'ny asam-panjakana, ankoatra ireo lohahevitra hafa. Manantena isika rehetra fa izay nianaran'izy ireo dia hitombo ao anatin'ireo tanora ireo satria mihalehibe tahaka ny olona tsirairay izy ireo.
Famaranana ny atrikasa sy ny fanolorana diplaoma. Closing of workshop and participation diplomas
Misy ny hantsana mahatonga voka-dratsy eo amin'ny fianarana ara-panjakana sy ny fahazoam-baovao ary ny fahaizana mikirakira solosaina eo amin'ny mponina teratany. Manantena izahay fa nanampy tamin'ny fandresena ireo elanelana ireo tamin'ny alalan'ny fahefan'ny olom-pirenena. Tsy maintsy mampihatra izay nianarany ireo tanora nanatrika ny atrikasa, izay efa mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Chariboan Joi (nampiofanin'ny OJIRU sy Alianza Arkana) amin'izao fotoana. Angamba mety ho mpanao fanadihadiana an-gazety ry zareo afaka fotoana fohy. Ho hitantsika amin'ny volana ambony izany.
Taorian'ny atrikasa, nisy ny fiovana kely teo amin'ny fitantanana ny OJIRU. Amin'izao fotoana izao, solontena roa no voatendry handrindra ny tetikasa, Joely Mirena sy Ketín Gonzales, izay efa niasa momba ny fanofanana amin'ny fitaovana bilaogy.
Amin'ny volana ambony izahay hifantoka amin'ny fikirakirana am-peo sy ny fomba fampidirana izany ao amin'ny tranonkala, amin'ny fanamafisana ny fifandraisan'ny OJIRU, ary ny fanamafisana ny bilaogy ny ezaka ataonay.